१५.३० अंकले बढ्यो बजार, होटल्स तथा पर्यटन समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाए
साउन १३, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेपालको शेयर बजार ३ हजार ९४ दशमलव ९४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् १५ दशमलव ३० अंकले बढेको हो ।३ हजार ८८ दशमलव ४५ विन्दुदेखि खुला भएको बुधवारको बजार ३ हजार ११२ दशमलव २१ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने ३ हजार ७५ दशमलव ९५ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
यस दिन नेप्से परिसूचक बढेपनि अघिल्लो कारोबार दिनको भन्दा कारोबार रकम भने घटेको छ । मंगलवार रू. १५ अर्ब १७ करोड ६ लाख ५१ हजार बराबरको ३ करोड २३ लाख ५५ हजार २६० कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा बुधवार रू. १३ अर्ब २९ करोड १९ लाख ५४ हजार बराबरको २ करोड ८१ लाख ७० हजार १७२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यो कारोबार २१९ पटकको व्यापारमा १ लाख २८ हजार ७८० पटकको व्यापारमा भएको हो । बुधवार सर्वाधिक रकमको कारोबार युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ३८ करोड ६१ लाख ४७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता रू. ६ दशमलव ४० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४८६ पुगेको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरपछि नेशनल हाइड्रोपावरको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ३६ करोड ५३ लाख ७५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता रू. १० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३७७ कायम भएको छ ।
यस दिन नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक, मल्टिपर्पस फिनांस र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिकित्ता रू. ७३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ८०३, मल्टिपर्पस फिनांसको प्रतिकित्ता रू. ४८ दशमलव ६० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५३४ दशमलव ८० र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. १४८ दशमलव ९० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ६३७ दशमलव ९० कायम भएको छ ।
बुधवार बढेको बजारमा पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १९ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३५६ कायम भएको छ ।
बुधवार होटल्स तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक ७ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको छ भने निर्जीवन बीमाको ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, लगानी समूहको २ दशमलव ८९ प्रतिशत, वित्तको २ दशमलव ६३ प्रतिशत, जीवन बीमाको २ दशमलव ४१ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत र लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
यो दिन जलविद्युत् समूहको सर्वाधिक १ दशमलव ४७ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ भने बैंकिङ्गको शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र म्चुअुअल फण्डको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
नबिल ब्यालेन्स फण्ड - २ सहित ५ ओटा धितोपत्रमा उच्च खरीद माग [२०७८ असोज, १०]
कामना सेवा विकास बैंकको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री [२०७८ असोज, १०]
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सर्किट, प्रतिकित्ता रू. १४४८.९० पुग्यो[२०७८ असोज, १०]
प्रि - ओपन सेसनमा १६.६२ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक[२०७८ असोज, १०]